ငါဝေးလံသောဆက်ဆံရေးအတွက်မိပါတယ်နှင့်တစ် ဦး တည်း VALENTINE DAY ကိုသုံးစွဲခဲ့သည် - နှုန်းထားများ
ငါဝေးလံသောဆက်ဆံရေးအတွက်မိပါတယ်နှင့်တစ် ဦး တည်း Valentine Day ကိုနေခဲ့ရသည်
ချစ်သူများနေ့၊ ပန်းများနှင့်ချောကလက်တို့ဖြင့်သင်၏ထူးခြားထင်ရှားသောအရာတစ်ခုကိုသင်ရေချိုးသောတစ်နေ့တာတွင်၊ သင်သည်အခြားမည်သည့်နေ့အတွက်မဆိုပေးဆပ်ရန်နှင့်သင်၏နှလုံးကွဲနိုင်သည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။
သင်တစ်ကိုယ်ရေနေမဟုတ်လျှင်အရာအားလုံးသည်ကြီးလှ၏။ ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးတာက LDR ထဲမှာ။
တစ် ဦး LDR ၌ဖြစ်ခြင်း Valentine Day ကိုအပေါ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်းထက်ပိုဆိုးသည်။ သင့်မှာတစ်ယောက်ယောက်ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမိုင်နဲ့မိုင်လောက်ဝေးတယ်။ သင်သည် Instagram ကို ဖြတ်၍ Snapchat ပုံပြင်များကိုဖွင့ ်၍ စုံတွဲများအတူတကွအတူနေပြီးအတူတူအတူတကွနေထိုင်ကြသည့် Tweets ကိုဖတ်ရှုပြီးသင်အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်။ ဒါကငါတို့ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကအခြားပြည်နယ်တစ်ခုမှာနေတယ် , သင်ထင်ပါသလား။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ဟာကျွန်တော့်ခေါင်းပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့အမှောင်ထု V-Day တိမ်တိုက် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်မည်မျှခြေဆွံ့။ အထီးကျန်နေသည်ကိုသတိပေးနေခြင်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်အတွက်သာမန်နေ့တစ်ရက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီဟာကငါ Valentine's Day ကိုတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့တာပဲ။
youtube ဗီဒီယိုနှစ်ခုနှင့် crossfader တစ်ခု
5:00 p.m. အရက်သောက်ရန်သင့်တော်သောအချိန်နှင့်တူသည်။ Valentine's Day သည်ယခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ Indiana ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သောကြောင့်စနေနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တက်ခဲ့သည်။ Sahara Mart တွင် semi-bougie ပုလင်းတစ်လုံးဝယ်ခဲ့သည်။ ငါထွက်ခွာစဉ်တွင်, ငွေရှင်းကောင်တာတွင်သင်နှင့်သင်ချစ်ရသူသည် Valentine Day ကိုပျော်မွေ့မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ကဒီဒေါ်လာ ၁၅.၉၅ ပုလင်းကိုဆိုလိုသည်ဆိုလျှင်ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့ညအတူတူပျော်နေမှာပါ။
ဒုတိယမြောက်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ပြီးရင် Instagram ကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်လှိမ့်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် ကျောက်ပုစွန်နှင့်ကျောက်ပြားများ၊ ဒိန်ခဲအားလုံးနှင့်အတူဘော့အီဗန်မှ Homestead နံနက်စာကိုတွေ့ရသည်။ ရသည်မှာဒီမိန်းကလေးများရဲ့ရည်းစားကြိုတင်မှာကြားထားရန်ရှည်လျားလွန်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုရနိုင်ဘူး။ တောင်မှ Applebee ရဲ့။ ဒါကယူတာပဲ ဒီအစားအစာတွေအားလုံးကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာငါအရမ်းဆာလောင်မွတ်သိပ်နေပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်တာပါ။
ပီဇာရောက်လာတယ် ။ ငါထင်တာကသူတို့ဟာ 'ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးမြင်ရတဲ့အချစ်' ပဲလို့သူတို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ပြောတာပဲ။ စာသားလိုပဲ။ ဒါဟာနှလုံးပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပီဇာပြီးပြီ ငါအရမ်းပျင်းခဲ့ပေမယ့်နောက်တဖန်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကြည့်ဖို့စိတ်သဘောထားထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ Formation ဂီတဗီဒီယိုကိုတင်။ နှင့်ဂီတဗီဒီယိုကိုအလွတ်ကျက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အကြှနျုပျ၏အကအခုန်စတူဒီယို - အိပ်ခန်း - သည် Beyonce ပါဝါလမ်းလျှောက်ခြင်းကို ers ည့်ခံခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခုန်ခြင်းများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်ကြီးမားသောမြေအောက်ခန်းဖြစ်သည်။ #iSlay
ငါ၏အပြင်းထန်သောရွေ့လျားထံမှချိုးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါကကနေချွေးစေးတွေထွက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်ငါရင်ခုန်စရာရေချိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ Sam Cooke ကိုဝတ်ပြီးဝိုင်တစ်ပုလင်းထပ်သောက်ပြီးမျက်ရည်ကျခဲ့တယ်။
ရုပ်ရှင်အချိန်! ငါအချိန်တော်တော်များများကုန်လွန်ခဲ့သည်ငါစောင့်ကြည့်ချင်သောအရာကိုစဉ်းစား။ အိုကေ၊ တကယ်တော့ငါဟာမသေချာမရေရာတဲ့အတွက်ငါကြည့်ရှုမယ့်ရုပ်ရှင်ကိုရွေးဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော့်အတွက်ရုပ်ရှင်တစ်ကားရဲ့အရှည်ကိုယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ P.S. အတိတ် scrolled ငါချစ်သောသူ (ငိုချင်စိတ်မရှိ), Schindler ရဲ့စာရင်း (ရုံပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကနှင့်နှစ်ပတ်မတိုင်မီကစောင့်ကြည့်) နှင့် Dirty Dancing (ကပျော်ရွှင်ဇာတ်သိမ်းရှိပါတယ်) ။ နောက်ဆုံးတော့ငါရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ Insidious ။ ဒါဟာအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ဇာတ်ကားတုန်လှုပ်စရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ။ Valentine's Day ကိုတစ်ယောက်တည်းသုံးခြင်းထက်ပိုပြီးဘာတွေကစော်ကားတာလဲ။ အိုး Wilson နဲ့ပက်ထရစ် Wilson ။
ငါရုပ်ရှင်နှင့်စပျစ်ရည်ပုလင်းမှတဆင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အသင့်အတင့်သာမရှိသောရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်ကြောက်စရာရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ခြင်းကသင့်အားမကောင်းသောခံစားမှုကိုခံစားရစေသည် အဖြစ် ကြောက်တယ် ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ထွက်တော့မည် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံနှင့်ဘေ့စ်ကိုယူပြီးခေါင်းအုံးတွင်ထိုင်။ ယူခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နီးပါးအတူတူခဲ့ကြသည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ထိုနည်းတူစွာငါအိပ်မောကျသွားပြီးသစ်တစ်ခုနှင့်ရက်နာမှုအသစ်တစ်ခုကိုနိုးထခဲ့သည်။
Valentine's Day ကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုဝိုင်တစ်ပုလင်း၊ ပီဇာတစ်မျိုးနဲ့ဘီယွန်းစ်ယူခဲ့တယ်။ ငါသာဖေဖော်ဝါရီ 14, 2017 ဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2016 ထက်နည်းနာကျင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။